Myanmar IT Resource Forum » FREE TALKING ZONE » » Free Talking » Unicode စကားဝိုင်း
1 ၀ုိုင်းပြောပေးကြပါဦး on 14th March 2010, 11:11 am
အဲ့မှာရှိတယ့်ပိုစ့်ကို သွားကြည့်ပြီးဝေဖန်ပေးကြပါဦး။ ကျွန်တော်တော့ ငှက်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ ပြောခဲ့ပြီးပြီ။ ပြီးရင်ဒီမှာလဲ ထင်မြင်ချက်လေးတွေပြန်ပေးပါဦး။ စောစောစီးစီးတော့အကုသိုလ်ပွား ခဲ့ပြီ။ :gun
ကိုလင်းထက်ရေ နောက်ကို Code လေးခံပြီး လင့်ကိုထည့်ပေးပါ
2 Re: Unicode စကားဝိုင်း on 15th March 2010, 1:58 am
3 Re: Unicode စကားဝိုင်း on 15th March 2010, 4:53 am
ဟုတ်ပါတယ်ကို အီးတီရေ ကျွန်တော်နောက်ဆို သတိထားပါ့မယ်...ကျွန်တော်လည်း ပိုစ်တွေကို အလဟသ
လျှောက်တင်နေသလိုဖြစ်နေပါတယ်...နောက်တစ်ခါဆို ဖိုရမ်အကျိုးရှိတာပဲတင်ပါ့မယ်.....အကိုပြောတာကို သဘော
ပေါက်ပါတယ် စိတ်လဲဆိုးပါဘူးနော် :cry
4 Re: Unicode စကားဝိုင်း on 15th March 2010, 11:36 am
ယခုလက်ရှိအခြေအနေအရ MITR အနေနဲ့ Unicode တိုက်ပွဲထဲဝင်မတိုက်သင့်သေးပါ။ (ဘယ်သောအခါမှလည်း တိုက်မည်မဟုတ်)
လုပ်စရာရှိတာကို လုပ်သင့်တာကို ၊ လုပ်တဲ့သူကလုပ်ကြပေါ့။ ဝေဖန်တဲ့သူကလည်း ဝေဖန်ပေါ့။
မကြိုက်ရင်တော့ ကိုယ်တိုင်ရေးကြလေ။ ရှင်းနေတာဘဲ။ ဘာမှဝေဖန်နေစရာလိုဘူး။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်။
5 Re: Unicode စကားဝိုင်း on 17th March 2010, 9:09 am
ဟုတ်တယ် မင်မင်ရေ့ ယူနီကုဒ်ပိုစ့်ပဲ တခြားဘာမှမရှိပါဘူး....အဲ့တုန်းက ကျွန်တော်ကလဲ ဖတ်မိပြီးရုတ်တရက် ဒေါသ
6 Re: Unicode စကားဝိုင်း on 17th March 2010, 9:58 am
Unicode ကတော့ ကျွန်တော်တို့လို သာမာန်လူတွေ အပြင်ဘက်ကနေ ငြင်းစရာလိုတော့ပါဘူး။
Unicode အစစ်လို့ အော်နေတဲ့သူတွေက Font လောကကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ဖို့ အကွက်စရွှေ့နေပြီလေ။
သူတို့က Font ကို လက်ဝါးကြီးအုပ်မယ့်အပြင် OS တွေကိုပါ လက်ဝါးကြီးအုပ်ဖို့ စီးပွားရေး လှည့်ကွက်တစ်ခုကိုပါ ဖန်တီးလိုက်ပြီးသားပါ။ Microsoft က သဘောတူမယ် ၊ မတူဘူးဆိုတာတော့ ကျွန်တော်လည်း သိပ်မသိပေမယ့် ၊ တူလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကလူက ချမ်းသာပြီ။
တော်တော်များများကတော့ အဲဒီ့ စီးပွားရေး လှည့်ကွက်ထဲကို ၀င်မိအောင် ၀င်ကြသေးတယ်။
(တိုးတက်စေမှာကို လက်ခံပါတယ်။ သို့သော် အကျိုးအမြတ်တစ်စုံတစ်ရာယူပြီးမှ အနည်းငယ်တိုးတက်စေခြင်းမျိုးကို လက်မခံပါ။)
အော် ဒါနဲ့ Rank အကြောင်း အကြံပေးချင်တာကော ရှိသေးလားဟင်။ သဘောမတွေ့တာမျိုးပေါ့။
7 Re: Unicode စကားဝိုင်း on 17th March 2010, 10:22 am
ဟာ.. အဲလိုအကွက်ရွှေ့တာတွေကို တကယ်ကိုမသိတာ... အခုမှ ပိုနားလည်တော့တယ်ဗျာ... ကျနော်တို့ကတော့ တကယ်ကိုမသိတာ အဲလိုအကြောင်းတွေကိုလေ... အဲဒါကြောင့် ဘာလို့များ အဲဒါတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ အဲလောက်အထိတောင်ဖြစ်နေရသလဲဆိုပြီးတော့ တွေးတော့တွေးမိသား... အခုမှ ကွင်းဆက်ရသွားတယ်... ကျေးဇူးဗျို့... Rank တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ ပြောစရာကတော့ ထွေထွေထူးထူးမရှိပါဘူးဗျာ... ကောင်းမယ်ထင်သလိုသာလုပ်ပါ...
8 Re: Unicode စကားဝိုင်း on 17th March 2010, 1:42 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-10-27
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 52
စိတ်ထဲမှာ အဲဒီ အစီအစဉ်ကို ဘ၀င်မကျဘူး။
ဘာလို့လဲ။ Content တွေလေ။ အင်တာနက်မှာ ရှိတဲ့ နိုင်းနိုင်းစနေကစလို့ Content တွေ။
ဟာ ဒီ Ubuntu က ဇော်ဂျီ ပြသာနာ ပဲ။
Microsoft just pretend to haveacold (like the rabbit) in this case.
What's the problem ? Gnome is with Zawgyi (non Unicode) while KDE sticks to unicode.
Everybody knows the font that come with Windows win by default.
9 Re: Unicode စကားဝိုင်း on 17th March 2010, 1:52 pm
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ Font တိုက်ပွဲထဲ ၀င်ပြန်ရော့မယ်။
10 Re: Unicode စကားဝိုင်း on 17th March 2010, 1:58 pm
ζ. ζ. †
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 76
တညျနရော : မြို့တော်ရန်ကုန်
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-03-15
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 134
ဒါနဲ့ font အကြောင်းမေးစရာရှိသေးတယ်
တကယ်လို့သာ unicode စနစ်အတိုင်း အတိအကျလိုက်နာရရင် မြန်မာစာ စနစ်ပျက်လိမ့်မယ်နော်။
unicode အတိုင်းလိုက်မလား မြန်မာစာ အပျက်ခံမလား
11 Re: Unicode စကားဝိုင်း on 17th March 2010, 2:00 pm
ဟွင့်။ အကြံပေးတာကနေ ဘယ်နှယ့်လုပ် Unicode ကုန်ကြတာလဲ။
ငါကိုက စပြောမိတာ။ မှတ်မှတ်။
ပြောလက်စနဲ့ ဆက်ချကွာ။ ရှုပ်တယ်။
12 Re: Unicode စကားဝိုင်း on 17th March 2010, 2:28 pm
ကျွန်တော်ကတော့ မြန်မာစာ ပျက်မယ်ဆိုရင် unicode မသုံးဘူး
ခု အတိုင်းလည်း အဆင်ပြေနေသားကျနေတာပဲ
unicode က မဖြစ်မနေ လိုအပ်နေတာမှမဟုတ်တာ။
13 Re: Unicode စကားဝိုင်း on 17th March 2010, 2:34 pm
Unicode က တစ်ချို့သော Data Processing တွေအတွက် လိုတာတော့ လိုမယ်။
ဒါပေမယ့် မူရင်းမြန်မာစာလည်း မပျက်မစီးဘဲ ရှိနေရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပျော်မိမှာပါ။ တကယ်လည်းကောင်းလာမယ်ဆိုရင် Unicode ကို ပြောင်းသုံးကြမှာပေါ့။
14 Re: Unicode စကားဝိုင်း on 17th March 2010, 2:55 pm
လက်ရှ်ိဇော်ဂျီကို unicode ပြောင်းသုံးမယ်ဆိုရင် လက်ခံမယ်ဗျို့.........
15 Re: Unicode စကားဝိုင်း on 17th March 2010, 3:00 pm
လင်းထက် wrote: လက်ရှ်ိဇော်ဂျီကို unicode ပြောင်းသုံးမယ်ဆိုရင် လက်ခံမယ်ဗျို့.........
Zawgyi ကနေ Unicode font တွေကို ပြောင်းခိုင်းတာလားဟင်။
Zawgyi 2009 လိုမျိုးကို လိုချင်တယ်ပြောတာလား
Zawgyi လည်း Unicode Standard ထဲ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ၀င်လာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် Unicode Standard မှာကိုကြ ,ြ မခွဲထားတော့.....
16 Re: Unicode စကားဝိုင်း on 17th March 2010, 3:06 pm
ကဲကဲ Topic က တအားချော်သွားလို့။
ခွဲသင့်တာခွဲပြီး ပေါင်းသင့်တာတော့ ပေါင်းလိုက်ပြီ။
ဆက်ပြောချင်တဲ့သူအားလုံး ဒီနေရာမှာ လာခဲ့ပါ။
17 Re: Unicode စကားဝိုင်း on 17th March 2010, 3:11 pm
ကြောင်တောင် တောင်ဖြစ်သွားတယ်..... ဘယ်ရောက်သွားတာလဲလို့......ဇော်ဂျီက ယူနီကြိီးကို သွားမကုတ်သေးဘူး
18 Re: Unicode စကားဝိုင်း on 17th March 2010, 3:16 pm
လင်းထက် wrote: ကြောင်တောင် တောင်ဖြစ်သွားတယ်..... ဘယ်ရောက်သွားတာလဲလို့......ဇော်ဂျီက ယူနီကြိီးကို သွားမကုတ်သေးဘူး
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ ၊ Font တွေကို ပြိုင်ဆိုင်နေကြတာတော့ ကောင်းဘူးလို့မြင်တယ်။
ပြီးတော့ Unicode သုံးပါပြောနေကြတဲ့သူတွေကိုလည်း မေးချင်ပါရဲ့။ ဘယ်တော့မှ သူတို့ဟာက ပြီးမှာလည်း။ သူတို့ပြီးမှ ကျွန်တော်တို့က သုံးရမှာလား။ သူတို့လုပ်လို့ပြီးမှ မြန်မာလိုစရိုက်ကြပါ ပုံစံကြီးနဲ့။
တခြားဖောင့်က နေရာလုထားတယ်လည်း မယောင်ရာ ဆီလူးပြီးပြောနေသေးတယ်။ သူတို့ ဖောင့် တကယ်ကောင်းရင် ဘယ်ဖောင့်မှ သူတို့ကို မပြိုင်နိုင်ပါဘူး။
အဲဒါကို ဟိုလိုလွှဲချ ၊ ဒီလိုလွှဲချနဲ့ လုပ်နေကြတယ်။
ဟိုးအရင်က Unicode တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတုန်း ကျွန်တော် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးဖူးတယ်။ အဲဒီ့တုန်းက ငယ်သေးတော့ Comment တွေလာရင် ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမယ်မသိသေးလို့ မတင်ရဲတာနဲ့ ဒီတိုင်းထားထားတာ။ ပြန်ရှာကြည့်ဦးမှ။
19 Re: Unicode စကားဝိုင်း on 17th March 2010, 3:22 pm
ဇော်ဂျီကိုတော့ဘယ်တော့မှ ကျေးဇူးကန်းလို့မရဘူးဗျနော် ကျွန်တော်ထင်တာပဲ ဟဲဟဲဟဲ....
20 Re: Unicode စကားဝိုင်း on 17th March 2010, 3:27 pm
လင်းထက် wrote: ဇော်ဂျီကိုတော့ဘယ်တော့မှ ကျေးဇူးကန်းလို့မရဘူးဗျနော် ကျွန်တော်ထင်တာပဲ ဟဲဟဲဟဲ....
သူ့ကြောင့် အခုချိန်ထိ ၊ ကျွန်တော်တို့ ဒီစာလုံးလေးတွေကို အလွယ်တကူရိုက်ပြီးတော့ Communicate လုပ်လို့ရနေတာပေါ့ဗျာ
21 Re: Unicode စကားဝိုင်း on 18th March 2010, 12:08 pm
ဒါလေးကို ဖတ်ချင်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။
နောက်တခါ ဒါလေးရော ...
22 Re: Unicode စကားဝိုင်း on 11th April 2010, 11:20 pm
မြန်မာစာကို မြန်မာလိုမမြင်ရတော့မယ့် စနစ်ကြီးက လက်ဝါးကြီးအုပ်ရန် ကြိုးစားနေပြီလော???
စာတိုင်းကို Unicode နဲ့ရေးထားတဲ့အတွက် (ဘယ်သူက Translate လုပ်နေလဲတော့မသိဘူး ၊ ချီးတော့ကျူးတယ်။ တော်တော်များများပြီးလာပြီ) ဖတ်ရတာ လုံးဝ အဆင်မပြေဘူး။
မြန်မာစာစစ်စစ်မှာ မောက်ချ ၊ ၀ိုက်ချ တွေရှိရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့ တစ်ခုထဲလုပ်ရတာလဲ ၊ Data Processing တိကျစေဖို့ဆိုတဲ့ reason ကိုတော့ လက်မခံချင်ဘူး။ တခြား reason တွေလည်း သိပ်လက်မခံချင်ဘူး ၊ မြန်မာစာ sorting စစ်စစ်မှာလည်း မောက်ချ ၊ ၀ိုက်ချ ကို သီးသန့်စီ sorting စီတဲ့ စနစ်ရှိပြီးသားဆိုတော့ sorting & searching မှာတော့ ရောနိုင်စရာအကြောင်းမရှိလောက်ပါဘူး။ မြန်မာစာစစ်စစ်အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့.
ပြီးတော့ အခုဆိုရင် သူတို့က နေရာတိုင်းကို လွှမ်းမိုးဖို့ ခြေလှမ်းနေပြီ။ Windows ထဲလဲထည့်မယ်။ အခု Google မှာလည်း အရင်ကမှ တခြားဖောင့်တွေ (especially Zaygyi) နဲ့လုပ်ထားတာတွေ့ရသေးတယ် ၊ အခုတော့ အကုန် သူချည်းဘဲ။
ဘယ်လိုပြောပြော ကျွန်တော်တော့ ဘယ်လိုမှအားမပေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ။
အရင်လာအရင်ရိုက်စနစ်ကိုတော့ Error တက်စေနိုင်လို့ မထည့်တာကိုလက်ခံပေမယ့် ၊ စာလုံးပုံစံမှာ ဇော်ဂျီ လို ပေါ်မယ်ဆိုရင်အားပေးချင်ရဲ့။ ရရစ် ၊ ယပင့် ၊ ရရစ်ကြီး ၊ ၀ိုက်ချ ၊ မောက်ချ အကုန်ပါမယ် ဆိုရင်တော့ စာဖတ်ရလည်း ပိုအဆင်ပြေသွားမယ်ထင်တာဘဲ။
ဘာရယ်တော့မဟုတ်ဘူး ၊ ဒီနေ့ အဲဒီ့နေရာ အမှတ်မထင်ရောက်သွားရင်း ၊ မျက်စိထဲ လုံးဝကြည့်မရတဲ့ ဖောင့်တွေနဲ့ တွေ့လိုက်မိလို့ ၊ စိတ်ထဲရှိတာလေးပြောလိုက်တာပါ.။
Technical ပိုင်းတော့ သေချာမသိတော့ ကျွန်တော် မှားနေတာရှိလဲ ၊ ပြန်လည်ဝေဖန်ပေးပါဦး.
23 Re: Unicode စကားဝိုင်း